10:23 आईतवार ४ , श्रावण २०७७ NepalBit 736
म आरामै छु । आसा गर्छु की यहाँहरूलाई पनि कुशल मंगल छ । यो बिषम परिस्थितिमा आर्थिक हालखवर उल्लेखनीय नभए नि पारिवारिक हालखवर भने उत्कृष्ट नै छ, ठान्दछु । जब परिस्थिति हाम्रो बसमा हुँदैन तब हामी कुनै न कुनै शक्तिको सहारा लिन पुग्छौ, शास्त्रको सहारा लिन पुग्छौ । यसर्थ हामी कहिल्यै आत्तिनू हुँदैन बरु भागवत गिताको सार “जे भयो ठीकै भयो, जे हुदैछ ठीकै हुँदैछ र जे हुनेवाला छ ठीकै हुनेछ“ सँग एकाकार हुनसक्नुहोस् भन्ने ठान्दछु । जस्तै नाकाबन्दिले चिल्बिल भएका हामीमा मौलिक र स्व –उत्पादनमुखी चेत भरियो । यो शिक्षा संसारका सबै बिश्वविद्यालयले दिने भन्दा नि गतिलो शिक्षा हो । यो एउटा ’पाराडाईम शिफ्ट’ पनि हो । त्यसैले अहिलेको कोभिड चपेटाले पनि हामिलाई अपार ज्ञान प्रदान गरेरै बिदा लिनेछ । यद्यपी यो महामारीले हामीलाई थुप्रै पछाडि अल्झाइदियो । धेरै चिन्तित भएर कुनै सहजता प्राप्त हुँदैन यस्तो बेला, बरू चिन्तन मार्फत समायोजनका वैकल्पिक बाटाहरू खोजेर रोजेर नै जीवन सन्चालनका लागि अग्रसर बन्नुहोला ।
यहाँ धेरैजसो अर्थकै स्वार्थले मान्छे कुमान्छे बन्ने हो, सन्तोष लखेटिने हो, सम्बन्ध फाटिने, झगडा, कुलत जन्मिने हो, लूट र भ्रष्टाचार झाङ्गिने हो, स्वाभिमान र ईमान नाङ्गिने हो र ईष्र्या र बैमनष्यता चुलिने हो । त्यसैले यो बेला कमाइएन जमाइएन भनेर मुद्रा नबिगार्नुहोस् । बरु शारिर नाङियोस मन न्यानो राख्नुहोस् । परिवारमा सकारात्मक सोच र उर्जा सहितको एकता कायम राख्नुहोस, मेलमिलाप उत्कृष्ट बनाउनुहोस् । मन फुकाएर हरेक क्रियाकलापलाई सहभागितात्मक बनाई आफ्ना बालबालिकालाई मूल्य मान्यता सुझाउनुहोस र जीवन बाँच्ने कला सिकाइदिनुहोस ।
१ सय १० दिन भन्दा लामो बन्दाबन्दिले ओछ्यान लागेर पट्यार लाग्दो जिन्दगी बाँच्न विवश छौ । अझ बालबालिकाहरू भन्दा नि हामी उनिहरूका अवसरदाताहरू ताला लागेका शैक्षिक संस्थाहरूको परिणामत उनिहरूका घरभित्र थामिनसक्नु गतिविधिले थिल्थिलै भएका छौ, पक्कैपनि । तरपनि चाँदिको घेरा देख्नसक्नुहोस । जसका लागी आफ्ना कृयाकलापहरू माथि सिर्जनशील योजना पुनर्योजनाहरू गर्नुहोस । बालबालिकाका आदत निर्माण हुने बस उठ र बोली ब्यावहारमा कसिनुहोस, हप्किदपकी र चर्कचरकी बन्द गर्नुहोस । शान्ति र धैर्य ले हरेक कर्म गारउनूहोस । बस यस्तै यस्तै ।
परिवारमा हामी एक्लो छैनौ । यसै समय बिताउनु पाठको बिना तयारी कक्षामा प्रवेस गर्नु सरह हो । जसको परिणाम बालबालिकामा जिस्किने, जथाभावी बोल्ने, अनादर गर्ने, मतलव नगर्ने जस्ता बानिको बिकास हुनगई भविष्यमा आफ्नो साथै परिवारकै सम्मानमा धक्का लाग्ने दिन निम्तिने छ । त्यसैले परिवार समुहमा रहने र सामुहिक भावना र परस्पर सर्बोपरि हित र सहयोगमा आँच नआउने किसिमका शैलिहरू चयन गर्नुहोस । जब बालबालिकाले सही पथ प्रदर्शन पाउँदैनन तब पारिवारिक बिचलन्, अनादर र अनास्थाको चरण देखा पर्दछ । जसले गर्दा परिवार धराशायि बन्दछ र एउटा बालकरबालिका आफ्नो भविष्य प्रति उदसिन हुनपुग्छ र उसले जीवन भनेको अनुभवहरूको सङालो तथा असल बानि सहितको ब्यवहार हो भन्ने कुरा कहिलेई बुझ्न सक्दैन र जीवन बुझ्न भौतारिई रहन्छ । यो हुन बाट जोगउनूहोस !
प्यारा अभिभावकज्यू !
मैले अघिनै पनि संकेत गरेँ, अहिलेको समय एउटा अनपेक्षित र अप्ठ्यारो हो तर सँगै जीवनका लागि अपरिहार्य थुप्रै अनुभवहरू सङ्गाल्न सकिने अवसर पनि हो । किनकि सामान्य अवस्थामा गरिने कार्यहरू कर्मकाण्डी, यथास्थितिपरक र औपचारीक भैराखेका हुन्छन । यो समय जटिल हो तर यसलाई अधिकाधिक बालबालिका अनुकूल बनाउने कर्तव्य पनि हामी अभिभावककै हो, यो बुझ्नुहोस । हरेक परिस्थितिमा प्रगति खोजिदिने अवसरदाता नै कुशल अभिभावकको परिचय हो । यसर्थ यो कोरोना भाइरसको त्राहिमाम अवस्था र सिर्जित कठिनाई भित्र पनि आफ्ना जिम्मेवारिहरूलाई निर्वाह गर्न र कर्तव्य प्रति सदैव सचेत रहँदै बालबलिका तथा सिंगो समाज र अन्तत देशलाई नै आफूले सकेको निम्न उल्लेखित योगदान गर्नुहोस ।
पहिलो, यो संकटको समयमा बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक साथै अभिभावकिय मलम लगाउनुहोस । असहजताको जिन्दगी भोगाईलाई आत्मसाथ गर्दै शान्ति र मेलमिलाप सहितको वातावरणामा सुब्यवस्थित भएर अगाडी बढ्न सिकाइदिनुस ।
दोस्रो, यो समयमा परिवारमा नै समय बिताउनुपर्ने भएकाले हरेकका भावना र सोचको कदर गर्दै घरका हरेक काममा समूहगत सहभागिता कायम गर्ने र घरको काम बाहेकको समयमा सबैका सिर्जनशिलता प्रष्फूटन हुने जमघटको प्रबन्ध मिलाइदिनुहोस । सबैलाई कुनै न कुनै रुपमा कामको खाका र त्यसको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुस जसले उक्त काम प्रति अपनत्व को भावना जागृत गराउछ ।
तेस्रो, बालबलिकालाई जीवनका थूप्रै पाटापक्षको जानकारी गराउने कर्ममा लगाउनुहोस जसले ब्यबहार कुशलता प्रर्दशित हुनगई हरेक कर्ममा लगाव वृद्धि हुन जान्छ र सिपको आर्जन हुनजान्छ । जो जीवन पर्यन्त नभई नहुने गुण हो । यसलाई बिद्यालयको चार दिवार भित्र प्राप्त गर्न निक्कै कम संभावना हुनजान्छ । त्यसैले यो समय बालबालिकाहरू खेतबारिमा पसुन्, करेसाबारी तयार गरुन्, आफ्नो हातले उत्पादन गरुन्, भान्सा तयार गरुन्, घर सम्पूर्ण रूपले सफा गरुन्, लुगा धुने उध्रेका सिउने गरुन्, सरसामान मिलाउने, सजाउने, बुट्टा भर्ने गरुन, समाचार सुन्न्ने र समुहमा बादबिबाद गर्ने गरुन्, खुल्ला रूपले कुरा गर्ने गरुन्, कुरा गर्दा नम्रत, शिष्टता, निकटता, मायालु भावमा आदर कायम गरेर गरुन, कुरा सुन्ने गरुन र नम्र प्रस्तुती गर्ने गरुन र प्रेरणादायि कथाहरू पढ्ने र जिवनमा जोड्ने गरुन । यो सम्पूर्ण अवसरको एकमात्र ब्यवस्थापक अभिभावक नै भएकाले यस्ता सिप तथा बानि हरूको बिकास गरिदिनुहोस ।
चौथो, राज्यले उपेक्षा गरेकोे तर समाजले अपेक्षा गरेकोे संस्थागत शैक्षिक सस्थाहरूको जीवन रक्षाका साथै त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूको रक्षाको लागि आफ्नो समाज प्रतिको दायित्व पुष्टि गर्नुहोस । कतै अनलाइन शिक्षण भए कतै भएनन् होला तर सकिन्छ भने २–४ महिना निशर्त जागिरमा निर्भर तर अहिले जागिर बिहिन बनेकालाई खुला हृदयले बाँच्ने ब्यवस्थाको लागि संस्थागत विद्यालयमा अर्थ निर्माणमा सहयोग पुर्याउनुहोस । यसको इतिहासले उच्च मुल्याङ्कन गर्नेछ र आउने सहज समयमा उक्त विद्यालय मार्फत गतिशिल र गुणस्तरीय शिक्षालाई उत्प्रेरित गर्दछ । नत्र भने एउटा प्रश्न अझै अनुत्तरित नै रहिरहन्छ । त्यो हो, ’पैसा तिरितिरी प्राइभेट स्कुल राम्रो भन्ने अनि अफ्ठ्यारो पर्दा चै त्यो स्कुल को सवाल हो जेसुकै गरोस भन्ने र मुन्टो लुकाउने पुच्छर ठड्याउने हो त ?’ यो नसोच्नुहोस मानव जीवन रक्षा र आपसी बिश्वास कायम गर्नुहोस र उत्कृष्ट विवेक प्रदर्शन गर्नुहोस ! अन्यथा शिक्षा प्रणालि धराशायि बन्नेछ र समाजले उल्टो दिशा लिनेछ ।
पाँचौँ , देशमा चरम आर्थिक संकट परिरहेको बखत हामी ब्यवसायि भए ५० प्रतिशत मुनाफा रकम राज्य कोषमा राखिदिनुपर्छ र कर छली गरेर ठालुमा दर्ज भएका कोही हुनुभए कर तिरेर नागरिक हुनुहोस । सरकारी जागिरे भए आँफू काममा सरिक नभएको लकडाउनको अवधि भरको २५ प्रतिशत तलब रज्यकोषमा भराउनुहोस । त्यस्तो केही पनि नभएर सामन्य कृषिमा निर्भर नागरिक मात्र भए छरछिमेकमा आपसी सहयोग कायम गर्दै स्थानिय सरकारसँग आफ्ना उत्पादनको बजार व्यवस्थाको अनुरोध गर्नुस । अनि हरेकले कुनै न कुनै प्रकारको उत्पादन गर्नुहोस् र बाँडेर खानूहोस । अहिले कमाउने भन्दा गूजारा चलाउने कुरा नै प्रधान छ । साथै सिमितताका बिचमा पनि कोभिडसँग मानसिक तनावलाई शून्य बानउनूस र कहिल्यै पनि जीवन ब्यर्थ रहेछ भन्ने टुङ्गोमा नपुग्नुस !
प्रिय अभिभावकज्यू !
टीनेज प्रवेश नगरेकाका लागि विशेष रूपले खेलकुदको बिकास गरिदिनुस्, बोल्ने कला भरिदिनुस्, लेख्ने कला सिकाइदिनुस्, अभिनय, नृत्य, गीत संगीतको स्व–उत्प्रेरणा निर्माण गरिदिनुस । आफ्ना पुर्खा, नातेदार र थातथलोको बारेमा जानकारी दिनुस । आफ्ना संस्कृति, परम्परा र संस्कारको बारेमा स्मरण गराई राख्नुहोस । विशिष्ठ तथा सफल व्यक्तित्वका जीवनी सुनाउनुहोस्, प्रेरक पुस्तकाहरु मार्फत उर्जा भरिदिनुस । लेख रचना छपाइदिनुस्, मन लागेका अर्थपुर्ण कामहरु गर्ने मौका दिनुस र सँग सँगै खेलिदिनुस ।
अन्त्यमा, यो पनि बुझ्नुस कि मान्छे घुम्ने घुमाउने कर्ममा आनन्द लिइरहन्छ । देखाउने कुरामा अगाडी नै सर्दछ, साथिभाई भनेर मरिहत्ते नै गर्दछ । पहिला आफू जोगिने नै उपाय खोज्दछ्, अरुका उछालाईमा छल्किने नि गर्दछ । र अहिले हरेक दिन कोभिडको बिषयलाई लिएर अल्मलिने नि गर्दछ । यसका बबजुद पनि आफ्ना बालबालिकाहरूलाई अझै स्वतन्त्र पन्छि हुनदिने समय आएकै छैन । घर भित्रै रमाउदै ब्यवहारिक शिक्षा पाउन । घर भित्रै संग्रह गरेकोे सिपले हाम्रो जीवन उजिल्याउने छ । यसलाई मौका ठानेर घर भित्र नै बस्नुहोस । विद्यालय खुलेनन बालबलिका बिग्रिए भनेर फिट्फिटी नगर्नुहोला ।खुसी रहनुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस ।